စုံတွဲများအတွက်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌အကောင်းဆုံး All-Inclusive နှင့်နှင်းလျှောစီးအပန်းဖြေစခန်း ၃၀
By ဗစ်တိုးရီးယား Akpan TMLT စက်တင်ဘာလ 16, 2021 မိသားစု, လူနေမှုပုံစံစတဲ့, ခရီးသွား0မှတ်ချက်
ဤပြီးပြည့်စုံသောတည်းခိုခန်းများသည်ဧည့်သည်များကိုကြော့ရှင်းလှပသောအဆင့်မြင့်အခန်းများမှကျန်းမာသောလယ်တောမှစားပွဲဝိုင်းသို့အစားအစာများကိုသင်လုပ်ပေးချင်သောအရာများအားအဖန်ဖန်အထပ်ထပ်ပြုလုပ်ပေးသည်။ မိသားစုများ၊ စုံတွဲများ၊ သို့မဟုတ်တစ် ဦး တည်းအတွက်အထူးသင့်တော်သည် သူတို့ရဲ့ကျန်းမာရေးကိုတိုးတက်အောင်ကြိုးစားနေတယ်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ရွေးချယ်မှုသည်ဖြတ်တောက်မှုအားလုံးပါ ၀ င်သောစံနှုန်းများ၊ ဇိမ်ခံအပန်းဖြေအပန်းဖြေစခန်းများမှသစ်လုံးအိမ်များအတွင်းသို့ပိုမိုရိုးရှင်းသောတည်းခိုခန်းများနှင့် အိပ်ယာနှင့်မနက်စာပုံစံလုပ်ငန်းများ.
အမေရိကန်နိုင်ငံရှိအကောင်းဆုံး All-Inclusive Resorts များ
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌အားလုံးပါဝင်နိုင်သောအပန်းဖြေစခန်းများသည်အားလုံးပါဝင်သောစျေးနှုန်းများနှင့်အပူပိုင်းအပန်းဖြေအပန်းဖြေစခန်းများမှကျေးတောတောအုပ်များ၊ Victorian ဟိုတယ်များနှင့်တောင်ပေါ်တည်းခိုခန်းများအထိကွဲပြားသည်။
အောက်ပါတို့သည်အမေရိကန်ရှိအပန်းဖြေစခန်းဆယ်ခုစာရင်းတစ်ခုဖြစ်သည် အားလုံးပါဝင်နိုင်သည် (သို့) အထူးအထုပ်များပေးပါ အားလုံးပါဝင်နိုင်တဲ့အပန်းဖြေစခန်းတွေမှာတွေ့ရတဲ့သာယာအဆင်ပြေမှုများစွာပါ ၀ င်တဲ့ပရိုမိုးရှင်းများ။
၁။ Key Largo, Florida ရှိ Bungalows Key Largo
အဆုံးစွန်သောအချစ်ဇာတ်လမ်းသည်ဤလူကြီးများအတွက်သာဖြစ်သည် ဖလော်ရီဒါရှိအားလုံးပါဝင်နိုင်သောအပန်းဖြေစခန်းမရ။ ကျယ်ဝန်းသောဘန်ဂလိုတစ်ခုစီ၌စိမ်ထားသောရေချိုးကန်ပါ ၀ င်သောသီးသန့်ဝရန်တာတစ်ခု၊ ကျယ်ပြန့်သောစမတ်တီဗီနှင့်ခေါင်းအုံးမွေ့ယာတို့ပါ ၀ င်သောအိပ်ရာတို့ပါ ၀ င်သည်။
ကမ်းခြေမှာယောဂသင်တန်းတက်ပါ၊ သီးသန့် tiki လှေပေါ်အပျော်စီးထွက်ပါ၊ ဒါမှမဟုတ် site XNUMX ရှိစားသောက်ဆိုင်ခြောက်ခုမှာစားပါ။
စက်ဘီးများကိုဧည့်သည်များအပြင်နေ့စဉ်အုပ်စုလိုက်ယောဂသင်ခန်းစာများ၊ ရေကူးကန်အမျိုးမျိုးနှင့် Jacuzzis နှင့် site spa တစ်ခု (ကုသမှုအတွက်ကုန်ကျစရိတ်အပိုရှိသည်) ။
၂။ ကော်လိုရာဒို၊ Clark ရှိ Vista Verde ဧည့်သည်
မှာဧည့်သည်များ Vista Verde ဧည့်သည် အံ့သြဖွယ်ကောင်းပြီးသရုပ်ပျက်ဇိမ်ခံပစ္စည်းများကိုခံစားနေစဉ်ကျေးလက်လူနေမှုပုံစံကိုနေထိုင်နိုင်သည်။ ဤသမိုင်းဝင်မွေးမြူရေးဧည့်ခန်းတွင်ဖုန်းများ၊ တီဗီများ၊ အင်တာနက်မရှိပါ။
ရေကူးကန်၊ မြင်ကွင်းကျယ်ရှုခင်းများ၊ ကြံ့ခိုင်ရေးအထောက်အကူပြုအားကစားရုံ၊ အတွင်းစီးနင်းကစားကွင်းနှင့်ကြိုးများပါသောကလေးများအပိုင်းတို့ပါ ၀ င်သည်။
၃။ Pennsylvania ပြည်နယ် Hawley ရှိ Woodloch Pines Resort
ဒီမိသားစုပိုင်အပန်းဖြေစခန်း ဧည့်သည်များကိုနွေးထွေးဖော်ရွေသောကြိုဆိုမှု၊ ကောင်းမွန်သောခေတ်ဟောင်းနှင့်အတူတကွပျော်ရွှင်ဖွယ်ရာများဖြစ်စေရန်ဖြစ်နိုင်ခြေများစွာရှိသည်။
ဤအပန်းဖြေစခန်းသည်၎င်း၏ကျယ်ပြန့်သောလုပ်ဆောင်ချက်များအစီအစဉ်ကြောင့်လူသိများပြီးအကျိုးစီးပွားမျိုးစုံကို ဦး စားပေးသည်။
Woodloch Pine Resort ၌ချန်ပီယံဂေါက်ကွင်းနှင့်ကမ္ဘာ့အဆင့် spa တစ်ခုကိုလည်းရရှိနိုင်ပါသည်။
အိမ်တွင်းနှင့်ပြင်ပရေကူးကန်များ၊ ကျောက်တောင်တက်နံရံများ၊ ကယပ်လှေ၊ snowshoeing နှင့်ညစဉ်ဖျော်ဖြေရေး ရရှိနိုင်သောအဆင်ပြေမှုများအနက်
၄။ ဂျော်ဂျီယာ၊ Little St. Simons Island တွင်တည်းခိုပါ
အားလုံးပါဝင်သည် Little Saint Simons Island အပန်းဖြေတွင်တည်းခိုပါ အေးချမ်းမှု၊ အထီးကျန်ခြင်းနှင့်သဘာဝအလှတရားကိုရှာဖွေလိုသူများအတွက်အထူးသင့်တော်သည်။
၎င်းတွင်မြေဧက ၁၁၀၀၀ ကျော်နှင့်ပုဂ္ဂလိကပိုင်ကမ်းခြေခုနစ်မိုင်ကျော်ရှိသော်လည်းလူ ၃၂ ဦး ကိုအချိန်မရွေးနေခွင့်ပြုသည်။ ဒါက နှေးကွေးသောအရှိန်ကိုရှာဖွေနေသူများအတွက်စံပြနေရာဖြစ်သည်သာယာသောလေထုတွင်ကိုယ်ပိုင်ကုသမှုနှင့်အတူ။
စားဖိုမှူးကစီစဉ်ပေးထားသောအစားအစာများ၊ ကျွန်းသို့လှေဖြင့်ပို့ဆောင်ခြင်းနှင့်နေ့စဉ်သဘာဝပညာရှင်တို့ ဦး ဆောင်သောလေ့လာရေးခရီးများရနိုင်သည်။
၅။ Port St. Lucie, Florida ရှိ Club Med Sandpiper Bay
Club Med Sandpiper Bay သည်အခြားကာရစ်ဘီယံအားလုံးပါဝင်နိုင်သောအပန်းဖြေစခန်းများကဲ့သို့ဧည့်သည်များကိုရေကူးကန်အနားတွင်အပန်းဖြေရန်၊ ရေလှုပ်ရှားမှုများတွင်ပါ ၀ င်ရန်နှင့်ကြိုက်သလောက်စားနိုင်သောက်နိုင်သည်။
အတွေ့အကြုံရှိနည်းပြဆရာများနှင့်အတူအားကစားအထောက်အကူပြုပစ္စည်းများ၊ ကလေးများကလပ်များနှင့်ပြင်ပရေကန်များ အဆင်ပြေမှုများကြားတွင်ရှိသည်။
Arizona၊ Tucson ရှိ White Stallion Ranch
White Stallion Ranch သည်အနောက်အမေရိကယဉ်ကျေးမှု၏စစ်မှန်သောအတွေ့အကြုံကိုပေးနိုင်သောအားလပ်ရက်အတွက်တည်းခိုရန်အကောင်းဆုံးနေရာဖြစ်သည်။
ဒီဟိုတယ်ကိုဧည့်သည်တွေအတွက်အားလုံးပါဝင်တဲ့အထုပ်တွေပါ ၀ င်တဲ့အတွက်ဒီကောင်လေးကမွေးမြူရေးခြံနဲ့ဇိမ်ခံအပန်းဖြေစခန်းကြားဖြတ်သွားအဖြစ်မကြာခဏဖော်ပြလေ့ရှိပါတယ်။
ရေပူကန်နှင့်ရေပူကန်၊ အပန်းဖြေနေရာ၊ ရေပူစမ်း၊ ညစဉ်ဖျော်ဖြေရေးများနှင့် ကလေးများလှုပ်ရှားမှုပြက္ခဒိန်.
၇။ Pennsylvania၊ Skytop ရှိ Skytop Lodge
အဆိုပါ Skytop LodgePoconos တောင်တန်းများ၏ဗဟိုတွင်တည်ရှိပြီးဧည့်သည်များကိုအတိတ်ကာလသို့ပို့ဆောင်သည်။
၁၉၂၈ ခုနှစ်တွင်တည်ဆောက်ထားသောဤရှေးဟောင်းတည်းခိုခန်းသည်ဧည့်သည်များကိုပတ်ဝန်းကျင်၊ ဇိမ်ခံအပန်းဖြေစခန်းနှင့်ကြမ်းတမ်းသောပြင်ပဧရိယာသို့ ၀ င်ရောက်နိုင်သည်။ ဒီ ၅၅၀၀ ဧကကျယ်တဲ့မြေပေါ်မှာလုပ်စရာတွေအများကြီးရှိတယ်။
အပြင်အဆင်များ၊ Spa အပြင်အဆင်များ၊ စွန့်စားခန်းလှုပ်ရှားမှုများနှင့်လက်ရာမြောက်သောထမင်းစားခန်းအတွေ့အကြုံများပါဝင်သည်။
၈။ Arizona၊ Tucson ရှိ Miraval Arizona Resort & Spa
အဆိုပါ Miraval Arizona Resort & Spa သာယာလှပသောအားလပ်ရက်အတွက်အဓိကနေရာသည်ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်တောင်တန်းရှုခင်းများနှင့်သဲကန္တာရလေကိုငြိမ်းစေသောအရာတစ်ခုဖြစ်သည်။
၎င်းသည်အလုံးစုံပါဝင်သောစျေးနှုန်းနှင့်ပြန်လည်ရှင်သန်စေသော spa ၀ န်ဆောင်မှုများရွေးချယ်ပေးသောကြောင့်ဤအပန်းဖြေစခန်းသည်တစ် ဦး တည်းအချိန်လိုအပ်သူများအတွက်အလွန်ကောင်းမွန်သည်။
ခန္ဓာကိုယ်ပြန်လည်နုပျိုစေသောရိုးရာဓလေ့များ၊ ဆံပင်ထိန်းသိမ်းမှု၊ အသားအရေထိန်းသိမ်းမှုနှင့်စွမ်းအင်ကုထုံးကုထုံးများအားလုံးကိုဤဆုရ spa တွင်ရရှိနိုင်ပါသည်။
၉။ Alaska Kachemak Bay Wilderness Lodge
အားလုံးပါဝင်သည် Kachemak ပင်လယ်အော်တော၌ Lodge Alaskan ပတ် ၀ န်းကျင်သည်ရှေးကျသည်၊ သို့သော်ဇိမ်ခံအခန်းများ၊ လက်ရာမြောက်သောဟင်းလျာများနှင့်စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ထားသောအထုပ်များသည်အခြားအရာများသာဖြစ်သည်။
Gourmet အစားအစာများ၊ လှပသောပတ်ဝန်းကျင်တွင်ဇိမ်ကျသောတည်းခိုခန်းများနှင့်တစ် ဦး ချင်းစီလမ်းညွှန်ထားသောသဘာဝအတွေ့အကြုံများသည်ရရှိနိုင်သောသာယာ ၀ န်ဆောင်မှုအချို့သာဖြစ်သည်။
၁၀။ မီချီဂန်၊ Mackinac Island ရှိ Grand Hotel
သမိုင်းဝင် Mackinac Island ရှိတောင်ကုန်းတစ်ခုပေါ်တွင်တည်ထားသော Grand Hotel၊ ကားများခွင့်မပြုခြင်းနှင့်မြင်းလှည်းများသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၏အဓိကနည်းလမ်းမှာစစ်မှန်သောအမေရိကန်အလှတရားတစ်ခုဖြစ်သည်။
တစ် ဦး ချင်းစီဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသောအခန်းများ၊ အပြင်ဘက်ရေကူးကန်၊ ညစဉ်အကများ၊ မြက်ခင်းကစားနည်းများနှင့်နေ့စဉ်နေ့လည်ခင်းလက်ဖက်ရည်တို့ပါ ၀ င်သည်။
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌အကောင်းဆုံးစုံတွဲများအပန်းဖြေစခန်း ၁၀ ခု
1. Hallmark Resort - Cannon ကမ်းခြေ၊ Oregon
နိုင်ငံ၏အချစ်ရဆုံးဟိုတယ်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သော Hallmark Resort သည်ကျော်ကြားသော Haystack Rock ကိုအပေါ်စီးမှကြည့်။ Oregon မြောက်ပိုင်းကမ်းရိုးတန်း၏အလှဆုံးအပိုင်းများတွင်တည်ရှိသည်။
၎င်းသည်သင့်အားတစ်နေရာတွင်အေးအေးလူလူလမ်းလျှောက်နိုင်သည် ဒေါ်လာများနှင့်ပြည့်နေသောသဲသောင်ပြင်ကျယ်ကြီး ဒီရေတက်ချိန်၌သင်၏တံခါးမှခြေဖဝါးသာ
ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာ၏ရှုခင်းများ၊ ဓာတ်ငွေ့မီးလင်းဖိုများနှင့်လူနှစ် ဦး spa spa များပါသောအခန်းများကိုရရှိနိုင်ပါသည်။
၂။ Auberge du Soleil - ကယ်လီဖိုးနီယား၊ Napa Valley
Napa Valley သည် နာမည်ကြီးဟန်းနီးမွန်းခရီးဒါပေမယ့် Auberge du Soleil မှာနေလျှင်အထူးသဖြင့်ရင်ခုန်စရာအပန်းဖြေခရီးကိုရှာဖွေနေတဲ့ဘယ်စုံတွဲမဆိုအဲဒါကိုနှစ်သက်လိမ့်မယ်။
သပိတ်ပင်နှင့်သံလွင်ပင်များကြားတွင်တည်ရှိသောဤချစ်စဖွယ်အပန်းဖြေနေရာသည်စပျစ်ဥယျာဉ်များနှင့် Mayacamas တောင်တန်းများနှင့်မတူသောရှုခင်းများဖြစ်သည်။
အချက်အပြုတ်စုံတွဲများအတွက်ဟော့စပေါ့၊ ၎င်းသည် ၎င်း၏ဝိုင်တိုင်းပြည်ဟင်းလျာများကြောင့်ကျော်ကြားသည်၎င်းကို Michelin ကြယ်ပွင့်ပြင်သစ်စားသောက်ဆိုင်မှတည်ထောင်ခဲ့ခြင်းကြောင့်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
နေရာ၌ပုလင်း ၁၅၀၀၀ ပါသောမြေအောက်ခန်းအပြင်ပိုအေးချမ်းသောညစာစားရန်နှင့်နေဝင်ချိန်သို့သွားရန်ကော်ဖီဆိုင်နှင့်ဘားတို့ရှိသည်။
၃။ တည်ငြိမ်အေးချမ်းသော Bay Beach House Resort - မာရသွန်၊ ဖလော်ရီဒါ
မက္ကဆီကိုပင်လယ်ကွေ့၏ဇိမ်ခံခြင်း၊ အထီးကျန်ခြင်းနှင့်မြင်ကွင်းကျယ်ရှုခင်းများကိုရှာဖွေနေသောစုံတွဲများအတွက်ဤ Resort ကိုကျော်ဖြတ်ရန်ခက်ခဲသည်။
မာရသွန်သော့တွင်၎င်းသည် Florida Keys ရှိထိပ်တန်းအပန်းဖြေစခန်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးအပူပိုင်းဗစ်တိုးရီးယားပုံစံအိမ်များကိုနှစ်ထပ်နှင့်အိပ်ခန်းသုံးခန်းပါသောအပူပိုင်းဒေသများဖြစ်သည်။
အားလုံးတွင်အဆင်သင့်တပ်ဆင်ထားသောအရသာရှိသောမီးဖိုချောင်၊ မက္ကဆီကိုပင်လယ်ကွေ့ရှုခင်းများနှင့်အတူကျယ်ပြန့်သောပြတင်းပေါက်များဆီသို့ပို့ဆောင်ပေးသောအဆင့်နှစ်ခုစလုံးတွင်ပြင်သစ်တံခါးများပါ ၀ င်သည်။
လှပသောကိုယ်ပိုင်ကမ်းခြေ၊ လှေလှော်အပျော်ခရီးများပါ ၀ င်သောကိုယ်ပိုင်လှေဆိပ်၊ သမုဒ္ဒရာကမ်းခြေ tiki ဘား၊ ရေကူးကန်သုံးကန် (လူကြီးတစ် ဦး တည်း) နှင့်ရေကစားအငှားများလည်းရှိသည်။
Montana Rockies ရှိ Darby, Montana တွင်တည်ရှိပြီး Montana Rockies ရှိအံ့မခန်း Bitterroot တောင်များဖြင့်ဝန်းရံထားသော Triple Creek Ranch သည်ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံးအပန်းဖြေစခန်းများထဲတွင်တသမတ်တည်းအဆင့်ရှိသည်။
၎င်းသည်ဇိမ်ခံသစ်လုံးအိမ်များနှင့်မွေးမြူရေးအိမ်များတွင်တစ်ညတာတည်းခိုခွင့်ပါ ၀ င်သောအားလုံးသောတောတွင်းအားလပ်ရက်ဖြစ်သည်။ အခန်းအားလုံးတွင်သစ်သားလောင်ကျွမ်းသောမီးလင်းဖိုနှင့်ကြယ်များအပန်းဖြေအနားယူရန်ရေပူကန်တစ်ခုပါ ၀ င်သည်။
တောင်တက်ခြင်း၊ မြင်းစီးခြင်း၊ ဂေါက်ကစားခြင်းခွေးလျှောခြင်းသည်တစ်နှစ်ပတ်လုံးရရှိနိုင်သောလှုပ်ရှားမှုအနည်းငယ်မျှသာဖြစ်သည်။ လတ်ဆတ်သောပြည်တွင်းပါဝင်ပစ္စည်းများဖြင့်ပြင်ဆင်ထားသော Gourmet အစားအစာများလည်းပါဝင်သည်။
၅။ Dunton Springs Resort - Dolores, Colorado
၁၉ ရာစုမှအံ့သြဖွယ်ကောင်းသောထိန်းသိမ်းထားသောမြို့တစ်မြို့တွင်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်တွင်းထွက်ရေပူစမ်းများနှင့်အတူ Dunton Hot Springs သည် San Juan တောင်တန်းများကိုနောက်ခံထားပြီးရင်သပ်ရှုမောဖွယ်တောအုပ်တစ်ခုအဖြစ်တည်ရှိသည်။
ရှေးဟောင်းသစ်လုံးအိမ်များပါ ၀ င်သောလက်စွပ်တစ်ကွင်းကိုအံ့သြဖွယ်ကောင်းသော spa၊ ကောင်းမွန်စွာသိုလှောင်ထားသောစာကြည့်တိုက်တစ်ခုနှင့်ဘားတစ်ခုကဲ့သို့သာယာလှပသောနေရာများသို့ပြန်လည်ပြုပြင်ထားသည်။
၆။ Hana-Maui Resort-Maui, Hawaii
Hana-Maui Resort သည် Maui ကမ်းခြေ၏သီးခြားတည်ရှိသော Hana Bay ကိုကျော်ဖြတ်ကာကမ္ဘာ့အချစ်ရေးဇိမ်ခံအပန်းဖြေအပန်းဖြေစခန်းများတစ်ခုအဖြစ်မကြာခဏဖော်ပြလေ့ရှိသည်။
ထူးခြားသော ၀ န်ဆောင်မှုကိုမျှော်လင့်ပါ ကမ္ဘာ့အဆင့်မီ spa၊ ကောင်းမွန်သောဟင်းလျာများနှင့်လှုပ်ရှားမှုမျိုးစုံမရ။ ရုပ်မြင်သံကြားစက်များ (သို့) နှိုးစက်နာရီများမရှိသောကြောင့်အခန်းများသည်အလွန်ကြီးမားပြီးအဆုံးစွန်ဆုံးအေးချမ်းမှုကိုပေးနိုင်ရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။
စိတ်ကူးယဉ်ချစ်သူများအတွက်အပန်းဖြေခရီးအတွက်လေယာဉ်ပျံသို့မဟုတ်လှေဖြင့် Little Palm Island Resort & Spa သို့ ရောက်၍ ပုခက်၌အပန်းဖြေပါသို့မဟုတ်သဲဖြူကမ်းခြေတစ်လျှောက်အပန်းဖြေလမ်းလျှောက်ပါ။
အရသာရှိလတ်ဆတ်သောပင်လယ်စာများစွာရှိသော်လည်းတီဗီများ၊ နှိုးစက်နာရီများ၊ ဖုန်းများမရှိသဖြင့်ကြေမွနေသောအခွံကို boardwalk တစ်လျှောက်တွင်သာအသွားအလာရှိသည်။
၎င်းတွင်သင့်အားစောင့်နေသောအေးစက်နေသော Champagne ပါရှိသည် သင်ရောက်သောအခါထူးခြားဆန်းပြားသောငါးများနှင့်အတူအံ့မခန်းရေအောက်ကမ္ဘာ၌ snorkeling ပြုလုပ်ရန်ခြေလှမ်းများသာဝေးသည်။
ဝိဇ္ဇာအတတ်အား Resort ကို စိတ်အပန်းပြေစေသောစိတ်အပန်းဖြေအနားယူရန်ရှာဖွေနေသည့်စုံတွဲများသည်၎င်းတို့၏အလုံးစုံကျန်းမာရေးကိုတိုးတက်စေနိုင်သောအရာဖြစ်သည်။
Boynton Canyon သည်နာမည်ကြီးသည် အနာကျက်ရန်အပြုသဘောဆောင်သောစွမ်းအင်ကိုစုပ်ယူပါဆီဒိုးနားဟိုတယ်၏ထူးခြားသောအနီရောင်ကျောက်များဖြင့်ဝန်းရံထားသည်။
၎င်းသည်ကမ္ဘာကျော်နာမည်ကြီး Mii Amo၊ Native American ပညာနှင့်ဓလေ့ထုံးတမ်းများမှုတ်သွင်းသောကုသမှုများကဲ့သို့ထူးခြားသောအကျိုးကျေးဇူးများကိုပေးသည်။
သန့်ရှင်းသောကုန်းပတ်များ၊ အံ့မခန်းမြင်ကွင်းများနှင့်ပျားအုံဓာတ်ငွေ့မီးလင်းများကိုအခန်းများနှင့်အခန်းများတွင်ရနိုင်သည်၊ ၎င်းသည်ကျိုးနွံသော pueblo ပုံစံအိမ်များတွင်ရှိသည်။
တောင်တက်စက်ဘီးစီးခြင်း၊ တောင်တက်ခြင်း၊ ရေကူးခြင်းဂေါက်၊ အချက်အပြုတ်အလုပ်ရုံများ၊ ယောဂကျင့်ခြင်း၊ တရားထိုင်ခြင်းနှင့်အခြားလှုပ်ရှားမှုများအားလုံးရနိုင်သည်။
၉။ Cliff House - မိန်း Cape Cape Neddick
ကမ်းပါးအိမ် အချစ်ရေးကိုရှာဖွေနေသောစုံတွဲများကိုဆွဲဆောင်သောနာမည်ကြီး Main resort တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်နှစ်ပေါင်း ၁၅၀ နီးပါးဧည့်သည်များကိုကြိုဆိုခဲ့ပြီးအတ္တလန္တိတ်တစ်လျှောက်တွင်ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်သမုဒ္ဒရာရှုခင်းများနှင့်လက်ရာမြောက်သောအနှိပ်ကုသမှုများပါ ၀ င်သည်။
ရေကန်သုံးခု၊ အပြင်ဘက်တရားထိုင်ခြင်းဝင်္ကပါ၊ ကြံ့ခိုင်ရေးအစီအစဉ်များနှင့်ဓာတ်ငွေ့မီးဖိုများနှင့်ကိုယ်ပိုင်ဝရံတာများပါ ၀ င်သောအရွယ်ရောက်ပြီးသောတိုက်ခန်းများသည်
Brush Creek Ranch နှစ်ယောက်အတွက် romantic getaway အတွက်အရမ်းကောင်းပါတယ်။ Wild West ၏ romanticism နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဇိမ်ခံ All-inclusive ဧည့်သည်မွေးမြူရေးခြံတွင်တစ်နှစ်ပတ်လုံးလုပ်ဆောင်ချက်များစွာကိုခံစားပါ။
နှင်းလျှောစီးခြင်း၊ နှင်းလျှောစီးခြင်း၊ နှင်းလျှောစီးခြင်းနှင့်နှင်းလျှောစီးခြင်းအားလုံးကိုဆောင်းရာသီတွင်ရရှိနိုင်သည်။
ပူနွေးသောလများအတွင်း၊ အိမ်၏မိုင် ၅၀ အကွာအဝေးကို ဖြတ်၍ မြင်းစီးပါ၊ ငါးပျံရန်သင်ယူပါ၊ ယောဂကျင့်ပါ၊ ထို့နောက် spa ကုသမှုများဖြင့်အပန်းဖြေပါ။
ဒါ့အပြင်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောထမင်းစားခန်းလည်းပါ ၀ င်သည်။ သင် "Homestead ကိုငှားပါ။
US တွင်အကောင်းဆုံးနှင်းလျှောစီးအပန်းဖြေစခန်း ၁၀ ခု
1. Stowe တောင်တန်းအပန်းဖြေစခန်း- Stowe, Vermont
Stowe တောင်တော်အပန်းဖြေစခန်း Vermont မြောက်ပိုင်းတွင်နှင်းလျှောစီးနိုင်သောဧက ၄၈၅၊ လမ်းကြောင်း ၁၁၆ ခုနှင့်ဓာတ်လှေကား ၁၂ စင်းတို့ကတောင်ထိပ်သို့တက်ရောက်ရန်စိတ်အားထက်သန်သောခရီးသွားများကိုကြိုဆိုသည်။
Mansfield နှင့် Spruce Peak တို့သည် gondola ဖြင့်အလွယ်တကူဆက်သွယ်ထားသောအပန်းဖြေစခန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ အပန်းဖြေစခန်းတွင်အစပြုသူနှင့်အဆင့်မြင့်လမ်းကြောင်းများရောနှောပါ ၀ င်သော်လည်း၎င်းသည်အလယ်အလတ်စကိတ်သမားများအတွက်အဓိကရည်ရွယ်သည်။
ကျွမ်းကျင်သောစကိတ်သမားများသည်ပန်းခြံ၏မြောက်များစွာသောကုန်းများ၊ အတက်များနှင့်သံလမ်းများပေါ်တွင်သူတို့၏ကျွမ်းကျင်မှုကိုစမ်းသပ်နိုင်သည်။ သင်ကုန်းဆင်းတောင်စောင်းများကိုမကိုင်တွယ်လိုလျှင်အပန်းဖြေစခန်းသည်နိုင်ငံဖြတ်ကျော်နှင်းလျှောစီးပေးသည်။ Spruce Peak ရှိ Lodge သည် Stowe Mountain Resort ၌သင်နှင်းလျှောစီးလျှင်တည်းခိုရန်နေရာဖြစ်သည်။
Lodge သည် Stowe ရှိတစ်ခုတည်းသောဇိမ်ခံအပန်းဖြေအပန်းဖြေစခန်းဖြစ်ပြီး ski-in၊ ski-out access ကိုခွင့်ပြုသည်၊ ၎င်းသည်လမ်းကြောင်းအားလုံးကိုအဆင်ပြေစွာသွားခွင့်ပေးသည်။ တောင်ပေါ်တွင်တစ်နေကုန်အကြာတွင် site spa ၌ပျော်ပျော်နေပါ။
ထို့နောက်ဂန္တ ၀ င်ဧည့်ခန်းများ၊ အခန်းများ၊ Penthouse များထဲမှနောက်တစ်နေ့၏လှုပ်ရှားမှုများအတွက်အနားယူပါ။ ကိုယ်ပိုင်စားဖိုမှူးနှင့်ကိုယ်ပိုင်စားဖိုမှူး ၀ န်ဆောင်မှုပါ ၀ င်သောဇိမ်ခံအငှားခန်းကိုသင်ကြိုတင်မှာနိုင်သည်။
2. Killington နှင်းလျှောစီးအပန်းဖြေ: Killington, Vermont
Killington နှင်းလျှောစီးအပန်းဖြေစခန်း Vermont အလယ်ပိုင်းတောင်ထိပ်ခုနစ်ခုတွင်ပျံ့နှံ့နေသောလမ်းကြောင်း ၂၀၀ ကျော်ရှိသည်၊ ထို့ကြောင့်သင်ရက်ပေါင်းများစွာလျှောစီးနိုင်ပြီးမောပန်းနွမ်းနယ်ခြင်းမရှိပေ။ လမ်းကြောင်းပေါင်းများစွာသည်စကိတ်သမားများနှင့်စွမ်းရည်များအားလုံးကိုနှင်းလျှောစီးသူများကသူတို့ကြိုက်နှစ်သက်သည့်အရာတစ်ခုကိုရှာဖွေလိမ့်မည်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်မူတောင်သည်အစပြုသူများထက်အလယ်အလတ်နှင့်အတွေ့အကြုံရှိသောစကိတ်သမားများထက်ပိုသာသည်။ Devil's Fiddle, Outer Limits, and Cascade အားလုံးသည်သင်လေကိုရှူရှိုက်စေမည့်မတ်စောက်သောပြေးလွှားမှုများဖြစ်သည်။
ထို့အပြင်အပန်းဖြေဥယျာဉ်၏ပန်းခြံသည်အလွတ်ပုံစံနှင့်လှည့်ကွက်လေ့ကျင့်ရန်နေရာများစွာကိုပေးသည်။ Killington Grand Resort Hotel သည်နှင်းဖုံးသောတံတားမှတဆင့်တောင်ပေါ်သို့နှင်းလျှောစီးရန်ခွင့်ပြုသောကြောင့်တည်းခိုရန်နေရာကောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
အပူကန်၊ ရေပူကန်များ၊ စားသောက်ဆိုင်များ၊ ဂိမ်းခန်းများနှင့်ကျန်းမာရေးကလပ်အားလုံးကိုယခင်ဧည့်သည်များကချီးကျူးကြသည်။ ပြောစရာမလိုတော့ပါဘူး၊ တောင်စောင်းများပေါ်တွင်တစ်ရက်အကြာ Killington Grand Spa သို့သွားခြင်းသည်အကြောကြွက်သားများကိုဖြေလျော့ရန်နည်းလမ်းကောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
၃။ Bretton Woods: Bretton Woods, New Hampshire
Bretton Woods သည် New Hampshire ၏အကြီးဆုံးနှင်းလျှောစီးအပန်းဖြေစခန်းဖြစ်ပြီးသင်၏နှင်းလျှောစီးအားလပ်ရက်အားအောင်မြင်စေရန် ၀ န်ဆောင်မှုများစွာရှိသည်။ အပန်းဖြေစခန်းသည်လမ်းကြောင်း ၉၈ ခုနှင့် glade များအပြင်နှစ်စဉ်နှင်းကျဆင်းမှုလက်မ ၂၀၀ ကျော်ရှိသည်။
တောင်စောင်းတွေပေါ်မှာပျော်စရာတွေအများကြီးရှိသေးတယ်။ Nordic နှင်းလျှောစီးခြင်း (သို့) နှင်းလျှောစီးခြင်းသည်ပြင်းထန်သောသက်တောင့်သက်သာမရှိသောဆောင်းရာသီလှုပ်ရှားမှုနှစ်ခုဖြစ်သည်။
4. Sugarloaf: Carrabassett Valley, မိန်း
Sugarloaf သည်နယူးအင်္ဂလန်၏ထိပ်တန်းနှင်းလျှောစီးအပန်းဖြေစခန်းများထဲမှတစ်ခုဖြစ်ပြီးမြေပြင်အကျယ် ၁၂၄၀ ဧကနှင့်အမြင့် ၂,၈၂၀ ပေဒေါင်လိုက်ကျဆင်းသည်။ လမ်းကြောင်းပေါင်း ၁၆၂ ခုသည်စကိတ်သမားများအဆင့်တိုင်းအတွက်လွယ်ကူပြီးကျွမ်းကျင်သည်အထိသာပြေးသည်။
ဒါ့အပြင်နှင်းလျှောစီးဓာတ်လှေကား ၁၃ စင်းနဲ့ထိပ်ဆုံးကိုစီးဖို့တန်းစီတာထက်နှင်းလျှောစီးတာကပိုအချိန်ဖြုန်းနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ သို့သော်စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းသောလုပ်ဆောင်ချက်များသည်အဆုံးမသတ်ပါ။
နိုင်ငံဖြတ်ကျော်နှင်းလျှောစီးခြင်း၊ ခွေးလျှောခြင်း၊ နှင်းများပေါ်တွင်အဆီစက်ဘီးစီးခြင်းနှင့်ရေခဲစကိတ်စီးခြင်းတို့သည် Sugarloaf သို့လာရောက်လည်ပတ်သူများအတွက်ရွေးချယ်စရာများဖြစ်သည်။
ယခင်ဧည့်သည်များအနေနှင့်သရေစာစားရန် ၄၅ လမ်းမြောက်တွင်ရပ်ရန် Sugarloaf Mountain Hotel သို့မသွားမီကြီးမားသောအပြင်ဘက်ရေပူကန်၊ နေရာတွင်ထမင်းစားခန်း၊ နှင်းလျှောစီးအပန်းဖြေနေရာနှင့်အပန်းဖြေတောင်များရှိသည်။
၅။ Crystal Mountain: Thompsonville, Michigan
ဤသည် Midwest နှင်းလျှောစီးအပန်းဖြေစခန်းဖြစ်သည်Traverse မြို့၏အနောက်တောင်ဘက်မိုင် ၃၀ အကွာတွင်တစ်နှစ်လျှင်နှင်း ၁၁ ပေရရှိပြီးစံပြအခြေအနေများကိုရရှိစေသည်။
စကိတ်သမားများသည်ဓာတ်လှေကားရွေးချယ်မှုရှစ်ခုမှတဆင့်လမ်းကြောင်း ၅၈ ခုကို ၀ င်ရောက်နိုင်သည်၊ အချို့မှာညနှင်းလျှောစီးရန်မီးထွန်းထားသည်။ ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်လမ်းကြောင်းတစ်ဝက်သည်အလယ်အလတ်စကိတ်စီးသူများအတွက်သင့်တော်ပြီး ၂၂ ရာခိုင်နှုန်းသည်အစပြုသူများနှင့် ၃၀ ရာခိုင်နှုန်းသည်အတွေ့အကြုံရှိသောစကိတ်သမားများအတွက်ဖြစ်သည်။
Ramps, halfpipes, jumps နှင့်အခြား features များကိုမြေပြင်ပန်းခြံဇုန်သုံးခုတွင်ရနိုင်သည်။ မြေပြန့်တွင်နေလိုသူများအတွက် cross-country skiing သည်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုဖြစ်သည်။
ဧည့်သည်များကိုစကိတ်ကွင်း၊ အပြင်ဘက်ရေပူကန်စင်တာ၊ စျေးဆိုင်များ၊ လိုလားသောစျေးဆိုင်များ၊ စားသောက်ဆိုင်များနှင့်တောင်ခြေရင်း၌ဟိုတယ်ရွေးချယ်မှုမျိုးစုံကိုတွေ့လိမ့်မည်။
သင်ပါတီကြီးတစ်ခုနှင့်သွားလျှင် Crystal Den ရှိဘန်ဂလိုများ၊ တောင်ပေါ်ရှိ Inn တို့၊ အလုပ်နှင့်ကစားရန်ပေါင်းစပ်လိုလျှင် (သို့) ဂန္တ ၀ င်ဧည့်ခန်းများအတွက် Hamlet တွင်နေပါ။
၆။ Whiteface Mountain Resort: Wilmington, New York
သင်သာရေရှည်တည်တံ့သောနှင်းလျှောစီးတောင်ကိုတွေ့လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ Whiteface တောင်အပန်းဖြေဒါပေမယ့် Rockies ရဲ့အရှေ့ဘက်မှာအကြီးမားဆုံးဒေါင်လိုက်တစ်စက်ကိုသင်တွေ့လိမ့်မယ်။
အရှေ့မြောက်ပိုင်းရှိအရှည်လျားဆုံးအလယ်အလတ်သင်တန်းများထဲမှတစ်ခုအပါအ ၀ င်၊ အနက်ရောင်စိန်အခက်အခဲနှစ်ဆနှင့်အတူမတ်စောက်သော၊ အသံချဲ့စက်များသည်အပန်းဖြေစခန်း၏ထူးခြားသောလက္ခဏာများဖြစ်သည်။
စကိတ်သမားများသည်အနည်းငယ်စိတ်ပျက်စရာကောင်းသော adrenaline အလုအယက်အတွက်မြေပြင်ပန်းခြံများသို့လည်းသွားနိုင်သည်။ သင် Whiteface ကိုအာရုံကြောစကိတ်သမားအဖြစ်ရောက်ရင်တောင်ရရှိနိုင်သည့်သီးသန့် (သို့) အုပ်စုသင်ခန်းစာများစွာထဲကတစ်ခုသည်လမ်းကြောင်းအပေါ်ယုံကြည်မှုရရှိရန်ကူညီနိုင်သည်။
သင်ဖြိုဖျက်ပြီးပါက ၁၉၈၀ ဆောင်းရာသီအိုလံပစ်ကိုလက်ခံကျင်းပသောဤတောင်အပန်းဖြေ၌အိုလံပစ်ရှုခင်းများကိုကြည့်ရန်အချိန်အနည်းငယ်ယူပါ။
ထို့နောက်မိုးလုံလေလုံရေကန်နှင့်ရေခဲပြင်စကိတ်များကဲ့သို့သောမိသားစုနှင့်အဆင်ပြေသောပတ်ဝန်းကျင်အတွက် Golden Plrow Lakeside Resort (သို့) Hotel North Woods၊ Lake Placid နှင့်နီးစပ်သောနှစ်ခုလုံးကို Hotel North Woods တွင်နေပါ။
7. Wintergreen Resort: Nellysford, ဗာဂျီးနီးယား
တောင်ဘက်တွင်ဆောင်းရာသီသည်၎င်း၏နှင်းလျှောစီးအပန်းဖြေစခန်းများနှင့်ဗာဂျီးနီးယားပြည်နယ်များမရှိ Wintergreen အပန်းဖြေစခန်း အကြီးမြတ်ဆုံးတစ်ခုဖြစ်သည်။ အပန်းဖြေစခန်း၏ဓာတ်လှေကားနှစ်စင်းသည်အခက်အခဲအဆင့်အမျိုးမျိုးရှိလမ်းကြောင်း ၂၆ ခုကိုရယူနိုင်သည်။
Ridlik's Fun Park၊ သီးခြားကလေးများအပိုင်းနှင့်တောင်ပေါ်ပူဇော်သက္ကာများကိုလှည့်ပတ်ရန်စကီလှည့်ကွက်များလေ့ကျင့်ရန်မြေပြင်ပန်းခြံ Wintergreen တွင်ဧည့်သည်များသည်အုပ်စုလိုက်သီးသန့်နှင်းလျှောစီးသင်တန်းများအတွက်စာရင်းသွင်းနိုင်သည်။
ဤအပန်းဖြေစခန်းသည်၎င်း၏အနောက်တိုင်းယှဉ်ပြိုင်မှုများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်လှုပ်ရှားမှု၏အရွယ်အစားမရှိခြင်းကိုပြုပြင်ပေးသည်။ မင်းနှင်းလျှောစီးတာကိုမင်းပြည့်တဲ့အခါပြည်နယ်ရဲ့အကြီးဆုံးချောင်းပန်းခြံကိုစမ်းကြည့်ပါ၊ အပန်းဖြေမိုးလုံလေလုံရေကူးကန်မှာရေစိမ်ပါ၊ ဒါမှမဟုတ် Wintergreen Spa မှာကိုယ့်ကိုကိုယ်နှစ်သိမ့်လိုက်ပါ။
Mountain Inn တွင်ရိုးရာဟိုတယ်အခန်းများမှကွန်ဒိုနှင့်အိမ်အငှားဖြစ်နိုင်ချေများ၊ တည်းခိုစရာရွေးချယ်စရာအမျိုးမျိုးကိုပေးသည်။
Blue Ridge တောင်တန်းများကိုသင်မည်သည့်နေရာ၌ရွေးချယ်သည်ဖြစ်စေသင်ရွေးချယ်သည်။
၈။ Timberline Four Seasons Resort: Davis, West Virginia
အဆိုပါ Timberline Four Seasons Resort အစပြုဖော်ရွေသောလမ်းကြောင်းများမှအနက်ရောင်စိန်ပြေးနှစ်ဆအထိလမ်းကြောင်းအမျိုးမျိုးကိုပေးသည်။
အလယ်အလတ် Twister လမ်းကြောင်းသည်စကိတ်သမားများအားသူတို့၏အလှည့်ကိုပြီးမြောက်စေပြီးအစပြုဖော်ရွေသော Upper Salamander လမ်းကို အစပြု၍ တောင်ထိပ်မှဆင်းခွင့်ပြုသည်။
ထို့အပြင်မြေပြင်ပန်းခြံနှစ်ခုသည်စကိတ်သမားများနှင့်နှင်းလျှောစီးသူများအတွက် feat များနှင့်လှည့်ကွက်များကိုလေ့ကျင့်ရန်လုံလောက်သောအခွင့်အလမ်းကိုပေးသည်။ Snow Squall Terrain Park တွင်အလွတ်ပုံစံစတန့်များနှင့်တူသောသူများအတွက် Snow jquall Terrain Park တွင်အငယ်စားအခုန်များနှင့်သေတ္တာများကိုရရှိနိုင်ပါသည်။
သင်အဆင်သင့်ဖြစ်လျှင် Thunder Snow Terrain Park သို့ပိုမိုခက်ခဲသောအင်္ဂါရပ်များနှင့်သံလမ်းများအတွက်သွားပါ။ သင်ကပညာရှင်တစ်ယောက်နဲ့တစ် ဦး တည်းအလုပ်လုပ်ရန်စာရင်းသွင်းနိုင်သည်၊ တောင်စောင်းတွင်သင်၏ပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်စေ၊ သင်၏အပြေးကိုတိုးတက်စေရန်အပိုညွှန်ကိန်းအချို့ကိုဖြစ်စေသင်လိုချင်သည်။
Timberline Hotel သည်အပန်းဖြေစခန်းသို့အဆင်ပြေသော ski-in/ski-out ၀ င်ခွင့်ကိုပေးသည်၊ အနီးတစ်ဝိုက်ရှိအခြားမိုတယ်များနှင့်နံနက်စာများသည်လည်းတောင်နှင့်နီးသည်။
၉။ Crystal Mountain Resort: Pierce County, Washington
Mount Rainier အမျိုးသားဥယျာဉ်အပြင်ဘက်တွင်တည်ရှိသောဤအပန်းဖြေစခန်းသည် ၀ ါရှင်တန်၏အကောင်းဆုံးနှင်းလျှောစီးရန်နေရာများအနက်မှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဧည့်သည်များအနေဖြင့်ဓာတ်လှေကား ၁၁ ခုမှတဆင့်ခွင့်ပြုချက်လမ်းကြောင်း ၅၇ ခုကို ၀ င်ရောက်နိုင်သည်၊ ၎င်းတို့အနက်ထက်ဝက်ကျော်သည်အလယ်အလတ်အဆင့်ပြေးပွဲများဖြစ်သည်။
ကျန်တာတွေကိုအစပြုသူနဲ့ကျွမ်းကျင်သူတွေခွဲထားတဲ့နေရာတွေအားလုံးမှာနှစ်စဉ်နှင်းလက်မ ၅၀၀ နီးပါးလက်ခံတယ်။ ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အထက်ပေ ၇၀၀၀ ခန့်တွင် Summit House စားသောက်ဆိုင်သည်သာယာသောစကိတ်သမားများအတွက်ကောင်းမွန်သောဟင်းလျာများကိုပေးသည်။
Campbell Basin Lodge သည်တောင်ပေါ်ခရီးအတွက်ရော၊ ခြေရင်းအနီးတွင်ပါနောက်ထပ်အပိုစားစရာများပါ ၀ င်သည်။
Alpine Inn၊ Village Inn နှင့် Quicksilver Lodge တို့သည်ပင်ပန်းနွမ်းနယ်သောစွန့်စားသူများအတွက်ခြေရင်းတွင်အဆင်ပြေသောတည်းခိုစရာသုံးမျိုးဖြစ်သည်။
ဤဟိုတယ်များသည်ပုံစံအမျိုးမျိုးကွဲပြားသော်လည်း၎င်းတို့အားလုံးသည်အခမဲ့ Wi-Fi နှင့်နှင်းလျှောစီးဓာတ်လှေကားများကဲ့သို့အဆင်ပြေသောအထောက်အပံ့များကိုပေးသည်။ ဟိ Crystal Mountain Resort ၊ Seattle ၏အရှေ့တောင်ဘက်မိုင် ၈၀ ခန့်တွင်တည်ရှိသည်။
10. Breckenridge နှင်းလျှောစီးအပန်းဖြေ: Breckenridge, Colorado
Breckenridge ကိုသင်ရောက်ပြီဆိုရင်နိုင်ငံရဲ့ထိပ်တန်းနှင်းလျှောစီးစရာနေရာတွေထဲကတစ်ခုကိုမင်းရောက်နေပြီဖြစ်ပြီး Breckenridge နှင်းလျှောစီးအပန်းဖြေစခန်းမှာအဆင်ပြေမှုတွေကမင်းကိုအကောင်းဆုံးနေဖို့ကူညီလိမ့်မယ်။
Denver ၏အနောက်တောင်ဘက်မိုင် (၆၀ ခန့်) တွင်ရှိသောကြီးမားသောနှင်းလျှောစီးအပန်းဖြေစခန်းသည်စူးစမ်းလေ့လာရန်တောင်းဆိုသောဝင်္ကပါဖြစ်သည်။ တောင်၏ထိပ်သည် ၁၂၉၉၈ ပေအထိမြင့်တက်ပြီးဓာတ်လှေကား ၃၄ စင်းဖြင့်သွားနိုင်သောလမ်းကြောင်း ၁၈၇ ခုရှိသည်။
မင်းအပန်းဖြေရဲ့ပန်းခြံထဲကပန်းခြံတစ်ခုမှာမင်းရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုတွေကိုလုပ်နိုင်သလိုဒီနေရာရဲ့ထူးခြားတဲ့မြင့်မားတဲ့ alpine terrain trails တွေမှာမင်းရဲ့လက်ကိုစမ်းကြည့်နိုင်ပါတယ်။ တောင်စောင်းတွေပေါ်မှာအစာစားချင်စိတ်ပေါ်လာပြီးနောက်မြို့ကိုရိုက်ဖို့အချိန်ကျပြီ။
စတိုးဆိုင်များ၊ ကဖေးများ၊ ပြတိုက်များနှင့်ဘီယာချက်စက်ရုံများသည်မြို့လယ်ကောင်ဟောင်းတွင်ပေါများကြွယ်ဝ။ မင်းရဲ့နှင်းလျှောစီးခရီးကိုပြည့်စုံသောယဉ်ကျေးမှုအတွေ့အကြုံအဖြစ်ပြောင်းလဲပေးသည်။
ပင်ပန်းနွမ်းနယ်နေသောစကိတ်သမားများသည် Crystal Peak Lodge နှင့် One Ski Hill Place ကဲ့သို့အပန်းဖြေဟိုတယ်၏အထင်ကရဟိုတယ်တစ်ခုတွင်သူတို့၏ခေါင်းများကိုထားနိုင်သည်။ နှင်းလျှောစီး၊ အိမ်တွင်းဓာတ်လှေကားလက်မှတ်များနှင့်တောင်ပေါ်သို့အမြန်သွားနိုင်သောနေရာကောင်းများကိုဟိုတယ်တစ်ခုတွင်တည်းခိုခြင်းဖြင့်ပါ ၀ င်သည်။
သင့်အနီးအနားရှိနောက်ထပ်အပန်းဖြေစခန်းများအကြောင်းမေးခွန်းများနှင့်အကြံပြုချက်များရှိပါက ကျေးဇူးပြု၍ ကျေးဇူးပြု၍ ဤဆောင်းပါးကိုသင်၏သူငယ်ချင်းများနှင့်ဝေမျှပါ။
Tags:ဖလော်ရီဒါရှိအားလုံးပါဝင်နိုင်သောကမ်းခြေအပန်းဖြေစခန်းများ, USA တွင်အားလုံးပါဝင်နိုင်သောကမ်းခြေအပန်းဖြေစခန်းများ, USA တွင်အားလုံးပါဝင်နိုင်သောအပန်းဖြေစခန်းများ, စုံတွဲများအတွက် usa ရှိအားလုံးပါဝင်နိုင်သောအပန်းဖြေစခန်းများ, ကျွန်ုပ်နှင့်အနီးဆုံးအပန်းဖြေစခန်းများ, အားလုံးပါဝင်နိုင်သောအကောင်းဆုံးအပန်းဖြေစခန်းများ, စုံတွဲများအတွက် usa ရှိအကောင်းဆုံးအပန်းဖြေနေရာများ, USA တွင်အကောင်းဆုံးအားလပ်ရက်အပန်းဖြေနေရာများ
အိမ်ငှားများသို့မဟုတ်အိမ်ငှားများကအိပ်ရာ bug များကိုဖယ်ရှားပစ်ရန်မည်သူပေးသနည်း။
Montana ရှိလေဆိပ်များ၊ Terminal များနှင့်အခြေအနေအချက်အလက်များကိုကြိုတင်စစ်ဆေးပါ
အမျိုးသားများအတွက် အကောင်းဆုံး လေ့ကျင့်ခန်းအဝတ်အစားများနှင့် ထိပ်တန်း Activewear အမှတ်တံဆိပ်များ